सर्वश्रेष्ठ पोकर गाइड र रणनीतिहरू - Gambling Papa
1 पोकर के हो?
1.1 कार्ड खेलका विभिन्न शैलीहरू
1.2 पोकरको इतिहास
2 पोकर कसरी खेल्ने?
2.1 खेलका नियमहरू
3 पोकर रणनीति चार्टहरू के हुन्?
4 शुरुआतीहरूको लागि पोकर गाईड
5 पोकर शर्त रणनीतिहरू
6 पोकरमा कसरी जित्ने?
7 पोकर सल्लाह र युक्तिहरू
अन्तत: पोकर सबै भन्दा क्यासिनो भित्र सबैभन्दा लोकप्रिय कार्ड खेल हो। यद्यपि यो आविष्कार गरिएको सबैभन्दा नयाँ खेलहरू मध्ये एक हो, यो अझै पनि विश्व मंचमा एक अत्यधिक उपस्थिति छ।
& lt; म & gt; यदि तपाईं पोकर क्षेत्र मा यसलाई ठूलो बनाउन को लागी गंभीर हुनुहुन्छ, त्यसो हो भने तपाईं खेल्न बस्नु अघि धेरै अध्ययन गर्नु पर्छ।
अन्यथा, तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरु तपाइँको अविज्ञित चालहरुमा भुई धन्यवाद धन्यवाद। भाग्यवस, यस केटा संग, तपाईं केहि को लागी सामना गर्न को लागी तयार हुन अधिक हुनेछ। यस तरीकाबाट, तपाईं एक हुनुहुनेछ जो दिनको अन्त्यमा पुरस्कार लिएर घर हिंडे। अर्को शब्दमा, तपाईं अर्को शासक चैम्पियन बन्नुहुनेछ।
तपाई सुरु गर्नु अघि
आधारभूतहरू सिक्नुहोस्: सबैले कतै सुरू गर्नु पर्छ। धेरै जसो उदाहरणहरूमा आधारभूत कुराहरू सिक्नु राम्रो हो तपाईले ती अवधारणाहरूमा प्रयास गर्नु भन्दा पहिले त्यसमा विस्तार गर्नुहोस्। अन्यथा, तपाईका विचारहरूको ट्र्याक नगुमा तपाई यसलाई राख्न धेरै नै गाह्रो हुन्छ।
जोखिम सहिष्णुता बुझ्नुहोस्: दिग्गज पोकर खेलाडीहरू जान्दछन् कि जब तपाईं खेल खेल्नुहुन्छ, तपाईं जोखिमको एक निश्चित स्तर स्वीकार गर्नुहुन्छ। हरेक खेल अत्यधिक जोखिममा हुनु हुँदैन। यद्यपि जोखिमविना, तपाईले यसलाई कहिल्यै ठूलो बनाउँनुहुन्न। यसैले, सहिष्णुता दृष्टिकोणको मध्यस्थता गर्नेहरूमा भित्र साँचो व्यावसायिकता बास गर्छ।
उचित अपेक्षाका साथ जानुहोस्: पक्कै पनि, पहिलो पटक टेबुलमा बस्दा तपाई कसरी विजयी हुनुहुनेछ भन्ने कुराको महान् छवि रंग्न सजिलो छ। यी सपनाहरु को प्रलोभन प्रकृति को बावजुद, अधिक यथार्थिक अपेक्षा राख्नु राम्रो हो। अन्यथा, तपाई जस्तो हुन चाहानुहुन्छ त्यहि भन्दा बढि तपाईलाई तल पठाउन सकिन्छ।
पोकर के हो?
सुरु गर्नका लागि, हामीले पोकर शब्दले के भन्न खोज्छौं बुझाउनु पर्छ। यो विश्वव्यापी रूपमा लोकप्रिय छ, कार्ड को खेल को ’bout मा एक लाख विभिन्न रूपहरु छन्। तिनीहरू प्राय: सबैले केहि साझा विशेषताहरू साझा गर्छन्। अझै, जब तपाइँ टेबलमा बस्नुहुन्छ, एक सानो फरक पनि एक खेल-परिवर्तनकर्ता हुन सक्छ। यसैले तपाईको टेबुलमा कुन भेरियन्ट प्ले भइरहेको छ भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो।
कार्ड खेलका विभिन्न शैलीहरू
वर्षौं बित्दै जाँदा, खेलका अधिक र अधिक फारमहरू प्रस्तुत भएका छन्। आज, सब भन्दा लोकप्रिय टेक्सास होल्डम हुनु पर्छ। यद्यपि यो टेक्सासमा आविष्कार गरिएको थिएन, यसले निश्चित रूपमा त्यस राज्यमा यसको विरासतलाई विस्तार गर्यो। जबदेखि विश्व प्रसिद्ध पोकर टूर्नामेन्ट पहिलो पटक प्रस्तुत भएको थियो, केहि त्यस्तै भएको छैन।
क्यासिनोमा सामान्य रूपमा खेलाइयो:
आजकल मानिसहरू आफ्नो स्थानीय क्यासिनोमा जान्छन् प्राय जसो समय द्रुत हातले खेल्न। यस बाहेक, जब तपाईं अनलाइन खेल्नुहुन्छ, यो तपाईंको हार्डको विपक्षीहरूलाई नक्कल गर्न अझ गाह्रो छ। जे होस्, अनलाइन खेल अधिकांश व्यक्तिहरूको लागि अधिक सुविधाजनक बन्न प्रबन्ध गर्दछ
सामान्यतया एक शर्त राख्नु समावेश गर्दछ:
अन्य क्यासिनो वा अनलाइन क्यासिनो कार्ड खेलहरू जस्तै, तपाईं यसलाई राख्नुहुनेछ यदि तपाईं सामेल हुने निर्णय गर्नुभयो भने। नियमहरू खेलको भेरियन्टमा प्रयोग हुने कुरामा निर्भर हुन्छ। धेरै जसो समय, कम्तिमा पनि खेलाडीहरू प्रत्येक राउन्डको सुरूमा एक शर्त राख्न बाध्य हुन्छन्। केही उदाहरणहरूमा, एक भन्दा बढी खेलाडीहरूले त्यस्तो शर्त खेल्नुपर्दछ। यो उत्तम हुन्छ यदि तपाईं डिलरसँग स्पष्टीकरण गर्नुभन्दा पहिले तपाईं कुन नियमहरू पछ्याइएको छ भनेर बस्नुभन्दा पहिले।
यद्यपि यो सब भन्दा प्रसिद्ध कार्ड गेमहरू मध्येको हो, सबैलाई पोकरको इतिहास यसको पूर्ण हदसम्म थाहा हुँदैन। यस्तो देखिन्छ कि मानिसहरू खेलको आधुनिक अवधारणाको साथ मायालु छन्। यद्यपि हाम्रो लागि खेलको ईतिहासबाट पछाडि समयको खजानामा यति धेरै जादू छ।
१ th औं शताब्दीको सुरूमा विकास भएको:
खेलको वास्तविक सुरुवात निश्चित रूपमा थाहा छैन। यद्यपि, १ th औं शताब्दीको सुरुसम्ममा, यो अमेरिकी महाद्वीपको व्यापक swaths भर मा खेलाइएको थियो। त्यस समयदेखि, लोकप्रियता प्रत्येक बितेको बर्षको साथ मात्र वृद्धि गर्न जारी छ।
पोकर कसरी खेल्ने?
अवश्य पनि, हामी अन्तत: खेलको दर्शनमा प्रवचन बुन्न सक्दछौं। जे होस्, यदि हामीले त्यस्तो मार्ग पछ्यायौं भने, त्यसोभए तपाईं कसरी गेम खेल्ने सिक्नुहुन्छ? यसैले हामी यस कुराको केन्द्रित हुनेछौं। तल, तपाइँ खेलको लागि एक संक्षिप्त गाइड पाउनुहुनेछ। हामीले पहिले नै भनेझैं पोकरको बहु रूपहरू छन्। यसैले, तपाईले निम्न नियमहरू केवल स्केचको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। केहि उदाहरणहरूमा, यी नियमहरू प्रश्नको रूपमा खेलमा लागू हुँदैनन्। जहाँसम्म, तिनीहरूले एक महान सामान्य परिचय को रूप मा सेवा गर्नु पर्छ।
विक्रेताले प्रत्येक मोडमा कार्डहरू ह्यान्डल गर्दछ: सबै क्यासिनो खेलहरूको लागि, डिलर प्रत्येक राउण्डभरि कार्डहरूको नियन्त्रणमा हुनेछ। यदि तपाइँ घर मा खेल खेल्न को लागी हुन्छ, तब मानिस घुमाउन को लागी गर्छ जो डलर मा प्रत्येक पालो पछि खेल्छ। यसैले, तपाईं कहाँ खेल्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै, यो चरण अलि फरक देखिन सक्छ। जेसुकै होस्, बाँकी सबै समान हुनुपर्दछ।
खेलमा सट्टेबाजीको क्रम घुमाइन्छ: धेरै जसो समय केवल केही व्यक्तिहरू प्रत्येक राउन्डमा बेट्स लगाउनु पर्छ। व्यक्ति जो बेट लगाउनु पर्छ प्रत्येक पूरा हात पछि फरक हुन्छ। धेरै जसो खेलहरूमा, एक व्यक्तिले अर्को भन्दा ठूलो ओछ्यान राख्नु पर्छ।
कार्डहरू घडीको दिशामा व्यवहार गरिन्छ: त्यो प्लेसमेन्ट पछि, प्रत्येक खेलाडीमा कार्डहरू व्यवहार गरिनेछ। सामान्यतया, कार्डहरू एक पटकमा तल खेल्ने क्रममा खेलाडीहरूलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। प्रत्येक खेलाडीले कार्ड पाइसकेपछि, डिलरले तिनीहरूलाई दोस्रोमा हस्तान्तरण गर्नेछ।
केही खेलाडीहरू शर्त बनाउन बाध्य छन्: सबै कार्डहरू व्यवहार भए पछि, मान्छेहरूले उनीहरूको बाजी लगाउने अवसर पाउँछन्। कहिलेकाँही, तपाईं एक शर्त राख्न बाध्य हुनेछौं। यदि तपाइँले निर्णय लिनुभयो कि तपाइँ एउटा राख्न चाहानुहुन्न भने तपाइँले तपाइँको हात भर्नुपर्नेछ। यसैले, तपाईंलाई खेलको राउन्डबाट हटाउँदै।
निम्न राउन्डमा, अधिक कार्डहरू टेबलमा राखिनेछ: कार्डहरू टेबलको बीचमा राखिनेछ सबैजनाले आफ्नो हात पक्रिए पछि। यी कार्डहरूले अन्तमा तपाईंको हात कती मूल्यवान हुनेछ भनेर निर्धारण गर्दछ। बाजी लगाए पछि अतिरिक्त कार्डहरू तल टेबलमा राखिन्छन्।
यस विन्दुमा, व्यक्तिहरूले थप ओडार राख्न सक्छन् वा मोड्ने: तपाईं निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ कि यदि तपाईं हातले जारी राख्न चाहनुहुन्छ भने। यदि तपाईंलाई लाग्छ कि त्यहाँ राम्रो मौका छ तपाईंले जित्न सक्नुहुन्छ, तब तपाईं आफ्नो शर्तको आकार बढाउन सक्नुहुनेछ। यसैले, अन्य खेलाडीहरू तपाइँको शर्त मा मिलाउन वा आफ्नो हात गिर गर्न बाध्य। जे भए पनि, तपाइँ प्रतिस्पर्धा हटाउनु छ या जीत को पूल बढाउनु हुनेछ।
कार्ड कारोबारको अर्को राउन्ड हुन्छ: अन्तमा, अन्तिम कार्डहरू सबैलाई हेर्नका लागि टेबलमा राखिनेछ। भेरियन्टमा निर्भर गर्दै, तपाइँले बेट्स राख्नको लागि अन्तिम अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म, सबै उदाहरणहरूमा, तपाईं टेबलमा आफ्ना हातहरू राख्नुहुनेछ र अन्य प्लेयरहरूसँग तिनीहरूको तुलना गर्नुहोस्।
अन्तमा, खेलाडीहरूले उनीहरूको कार्डहरू देखाउँछन् र विजेता निर्धारित गरिन्छ:
तपाईको हातमा कार्डहरूमा निर्भर गर्दै, तपाईले पहिले नै टेबलमा अवस्थित विन्दुहरूको केहि संख्या कमाउनुहुनेछ। यदि तपाईं आफ्ना विरोधकहरूलाई आउटस्कोर गर्न व्यवस्थित गर्नुहुन्छ भने, तपाईं बीचमा पूरै पुरस्कार स collect्कलन गर्नुहुनेछ। जहाँसम्म, यदि तपाईं आफ्नो विपक्षीसँग टाई गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले ज्याकपोट विभाजित गर्नुपर्नेछ।
पोकर रणनीति चार्टहरू के हुन्?
यस्तो देखिन्छ कि पोकर एक अपेक्षाकृत जटिल खेल हो। निश्चित रूपमा, त्यहाँ केवल थोरै रणनीति समावेश छ। विज्ञ खेलाडीहरू आफ्नो कलाको सम्मान गर्न वर्षहरू खर्च गर्छन् जब सम्म उनीहरू पेशेवरहरू प्रवेश गर्न तयार हुँदैनन्। यद्यपि, ती समान रणनीतिहरू धेरै अनुभवहीन प्रयोगकर्ताहरूले धेरै संघर्ष बिना नै काम गर्न सक्छन्। तलका कुनै एक रणनीति चार्ट प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो खेलबाट अनुमान समाप्त गर्नुहुनेछ। यस तरीकाले, तपाईं प्रत्येक विश्वास पूर्ण विश्वास संग गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, यसले तपाईंको विपक्षीलाई पनि बेवास्ता गर्दछ। तिनीहरूलाई यस्तो क्षमता देखाउँदै, तपाईं क्षेत्र मा एक प्रमुख आभा उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिलो, यो चार्ट तुलनात्मक रूपमा सीधा छ। यसले केवल प्रत्येक हातको मूल्य सबै केसमा के हुन सक्छ भनेर सूचीबद्ध गर्दछ। यस तरीकाबाट, तपाईले चाँडो निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ कि यो तपाईको कार्ड र खेलमा आधारित हात जित्नको लागि कती सम्भावना छ। प्रभावमा, तपाइँ निर्णयमा आउन लाग्न लाग्ने समयलाई न्यूनतम पार्नुहुनेछ। अन्यथा, तपाईंले त्यहाँ बस्नुपर्नेछ र हरेक चाल अनन्तको लागि सोच्नु पर्छ।
शीर्ष सुरू गर्ने हातहरू:
यो अर्को साधारण चार्ट हो जुन शुरुआतीहरूमा लोकप्रिय हुन जान्छ। तिनीहरू मध्ये एकको साथ, तपाईं चाँडै निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको पालोको सुरूमा तपाईंको सुरूवात स्थिति कत्तिको शक्तिशाली छ। यदि तपाईले याद गर्नुभयो कि चीजहरू राम्रो देखिँदैनन् भने तपाईले धेरै पैसा लग्नु अघि तपाईको कार्डमा खोट लगाउन सक्नुहुन्छ। अन्यथा, तपाईसँग हुनु भन्दा लामो समय सम्म बस्न सजिलो छ।
जित्ने चार्टहरूका ओड्स:
अन्त्यमा, यो शुरुवातकर्तालाई सिक्नको लागि सबैभन्दा जटिल चार्ट हो। यसमा यति धेरै जानकारी छ, हामी मात्र एक सारांश प्रयास गर्नेछौं। चार्टमा हेरेर, तपाईले देख्नुहुनेछ कि खेलको बखत प्रत्येक परमिटको लागि प्रतिशत मौका के हो। जब तपाईं विसंगति केहि देख्नुहुन्छ, तपाईं मानचित्र को उपयोग गर्न को लागी उचित परिस्थिति को लागी के गर्न को लागी चार्ट को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसैले, यदि तपाई यसलाई राम्ररी सिक्नुहुन्छ भने, यो पोकर खेलाडीहरूको लागि उपलब्ध सबै भन्दा उपयोगी उपकरणहरू मध्येको हो।
शुरुआतीहरूको लागि पोकर गाईड
पोकर खेल्नु त्यति गाह्रो छैन जति धेरै मानिसहरूले विश्वास गर्नुपर्दछ। वास्तवमा, नौसिखाहरूले आधारभूत कुराहरू मास्टर गर्न लामो समय लिन सक्दैन। पछि, तिनीहरूले आफ्नो रणनीति बढाउनको लागि केहि बढी जटिल विषयहरूमा ध्यान दिन सुरू गर्न सक्दछन्। शिल्पको लागि गहन भक्ति खेती गरेर, तपाईं अधिक पटक विजयी हुनुहुनेछ। यसलाई अर्कै किसिमले राख्न, तपाईं टेबुलको राजा हुन सक्नुहुनेछ जबसम्म तपाईं काममा राख्नुहुन्छ।
ब्लफहरू तपाईंको सब भन्दा शक्तिशाली संसाधन हुन्:
हुनसक्छ, पोकरमा सब भन्दा गलतफहमी भएको अवधारणा ब्लफ नै हो। यद्यपि प्रायः यसलाई शुरुवातीको चिन्हको रूपमा हेर्ने झुकाव छ, यो उनीहरूले महसुस गरेभन्दा धेरै उपयोगी छ। एक प्रभावशाली bluff संग, तपाईं एक हराउने हात तुरन्त जीतको खेल मा रूपान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ। निस्सन्देह, ’cause यो यस्तो संवादास्पद प्राविधिक हो, यो प्रायः व्यक्तिहरू रातारात मास्टर गर्छन्।
तपाइँले हात जित्न सक्नुहुन्छ यद्यपि कार्डहरू हराउनेछन्:
मानौं तपाईले टेबुलमा एउटा ठूलो ठूलो शर्त राख्नुभयो। जे होस्, बगाल पछि, यस्तो लाग्न सक्छ कि अनौठो तपाईंको बिरूद्ध भयो। यदि एक पेशेवर खेलाडीले उनीहरूलाई त्यस्ता परिस्थितिहरूमा भेट्टाए भने के हुन्छ? खैर, हाम्रो दृष्टिकोणबाट, समाधान बरु स्पष्ट देखिन्छ। तपाईंले पहिले नै राख्नु भएको बेट्स हराउनुको सट्टा, तपाईंको विपक्षीलाई साइक गर्ने प्रयास गर्नुहोस् ताकि उनीहरूले खेल गुमाए। यदि सफल भयो भने, तपाईंले हात र ज्याकपोट जित्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले यी सबै गर्न सक्नुहुन्छ कार्डको जोडी बिना जीत।
कहिले फोल्ड गर्ने भनेर जान्नु समान रूपमा महत्त्वपूर्ण छ:
कहिलेकाँही, खेलमा टाँस्न खोज्नु अर्को तर्फबाट हराउने रणनीति हो। जे होस् प्रशस्त पेशेवरहरूले विजयको लागि उनीहरूको बाटो ब्लफ गरे, तिनीहरूले पनि शर्त राख्नु अघि उनीहरू जति धेरै हातहरू मिलाउन सफल भए। यो आक्रामकता र रक्षा बीच सन्तुलन हो कि वास्तवमा मास्टरफुल खेल परिभाषित गर्दछ।
अन्ततः पोकर इच्छाशक्ति को एक प्रतिस्पर्धा हो:
तपाईं अन्य मानव विरोधीहरू विरुद्ध खेल्नुहुने हुनाले, यो यसको अन्तबाट इच्छाशक्तिको खेलमा विचलित हुन्छ। जबसम्म तपाईं आफ्नो दिमागमा मास्टर्ल कन्ट्रोल राख्नुहुन्छ, तपाईं एक च्याम्पियनको रूपमा सment्लग्नताबाट बाहिर आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। यदि त्यो तपाईंलाई अपिल लाग्छ भने, हामी तपाईंलाई सकेसम्म छिटो आफ्नो मानसिक शक्ति खेती गर्न प्रोत्साहित गर्दछौं। Insofar को रूप मा तपाईं खेल को लागी प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईं वर्धित मानसिक जटिलताबाट लाभ उठाउनुहुनेछ।
पोकर शर्त रणनीतिहरू
रणनीतिक रूपमा तपाइँको बेट्स राख्नु उभरती विजयी को अस्थिरता बदल्न सक्छ। मानौं तपाईं समग्रमा गाह्रो रात बन्नुभयो। यस बिन्दुमा, मानिससँग दुईवटा पथहरू छन् उनीहरूको सामना गर्नु।
खेलमा एक उपस्थिति कायम गर्न कन्जर्भेटिभ रणनीतिहरू:
एकातिर, तपाइँ सकेसम्म लामो समय सम्म खेलमा रहन कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्यतया, तपाईले राख्नु भएको बेट्सको आकार सीमित गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले बेट लगाउनुहुन्न जब पनि यो सम्भव हुन्छ। यस तरिकाले, तपाईं आफैंमा अधिक जोखिममा आफैंलाई प्रकट नगरीकन धेरै बेर खेल्न सक्नुहुन्छ। यस प्रकारको रणनीतिको साथ, पोकर चाँडै नै एट्रेसनको खेल बन्छ।
एक आक्रामक शर्त सही पल मा राखिएको एक जीत सुनिश्चित गर्न:
अब, अर्को तर्फ, तपाईं एक दृष्टिकोण लिन सक्नुहुनेछ जुन ठीक ठीक विपरित हो। समयको लागि स्टाल खोज्नुको सट्टा, तपाईं प्रत्येक पालोको सुरूमा रगतको लागि बन्दुक हुनुहुनेछ। टेबुलमा ठूलो बेट्स राखेर, तपाईं आफ्नो विरोधीहरूलाई निर्णायक कदम चाल्न बाध्य पार्नुहुनेछ। जबसम्म तपाईंको पक्षमा हातहरू जान्छन्, तपाईं अचम्मको वेगको साथ सबैलाई हटाउन सक्नुहुन्छ।
सन्तुलित दृष्टिकोणलाई केहि बढी उपद्रव आवश्यक पर्छ:
निस्सन्देह, कलाका मास्टरहरूले बुझ्दछन् कि यस खेलमा यस प्रकारको कालो र सेतो भिन्नताहरू भन्दा पनि धेरै छ। वास्तवमा, सबैभन्दा सफल पोकर खेलाडीहरू विगतका दुई रणनीतिहरू बीच वैकल्पिक। केहि परिस्थितिहरुमा ’em अरु जत्तिकै आक्रामक हुन्छन्। जे होस्, जब समय सही छ, तिनीहरू रूढीवादी कार्यको रणनीतिमा सर्छन्। तसर्थ, जब उनीहरू शक्तिशाली हुन्छन् तब उनीहरूले तिनीहरूको फाइदाको फाइदा उठाउँछन्। त्यसोभए, ती जोखिममा फर्के पछि उनीहरूले तिनीहरूको जोखिम न्यूनीकरणलाई कम गर्छन्।
पोकरमा कसरी जित्ने?
पोकरमा जितेको यो क्यासिनोमा अन्य धेरै खेलहरूसँग भन्दा सजिलो हुन्छ। धेरै जसो क्यासिनो खेलहरू अवसरमा निर्भर छन्, त्यहाँ तपाईको समस्याहरू सुधार्न तपाईंले गर्न सक्ने थोरै छ। पोकर संग, अर्कोतर्फ, चीजहरू धेरै फरक छन्। प्रभावकारी रणनीतिहरू सिकेर, तपाईं टेबलमा तपाईंको अवसर अधिकतम पार्नुहुनेछ। यसैले, यो तपाईको लागि एक विजेताको रूपमा टाढा हिँड्न सक्ने धेरै बढी सम्भावना हुन्छ एक पटक सबै भनिन्छ र भयो।
तपाइँका विपक्षीहरूलाई हटाउने:
हाम्रो दृष्टिकोणबाट, जब तपाइँ पोकर खेल्नुहुन्छ तब तपाइँका विरोधीहरू भन्दा खेलमा बस्नु नै आधारभूत लक्ष्य हो। जो कोही अन्त्यमा, अन्त्यमा, पुरस्कारको लागि दावी राख्ने उही हुनेछ। तसर्थ, तपाईं धेरै हातहरु को जीत बिना अन्तिम विजेता बन्न सक्छ। यदि तपाईं निर्णायक जीतहरू जित्नको लागि व्यवस्थित गर्नुहुन्छ भने, तपाईं अझै आफ्ना विरोधीहरूलाई शीर्षक स्वीकार गर्न बाध्य पार्नुहुनेछ।
पुरस्कारमा नजर राख्नुहोस्:
अन्य विशेषताहरूको रूपमा, ध्यान तपाईं विकास गर्न को लागी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुविधाहरु बीच हो यदि तपाईं महानताको चाहना गर्नुहुन्छ। हातमा कार्यमा केन्द्रित रहँदा, तपाईंले त्रुटिहरू हटाउनुहुनेछ जुन अन्यथा देखा पर्ने थियो। धेरै जसो उदाहरणहरूमा, यो त्यस्तो अवसर होइन जुन मानिसहरूले अवसरलाई पहिचान गर्न असफल हुन्छन्। वास्तविकतामा, यो सरल छ कि तिनीहरूले यो देखेको थिएन जब यो स्पष्ट थियो। जब तपाईं ध्यान विचलित हुनुहुन्छ मौकालाई वेवास्ता गर्न यो सजिलो छ। यसैले, खेल सफा हुँदा स्पष्ट दिमाग राख्नु टाइटेनिक फोर्स हुनेछ।
तपाईंको निर्णयहरूलाई प्रभाव नपरीकन भावनात्मक क्षणहरूलाई पार गर्न अनुमति दिईयो:
तपाईंले आफ्नो पहिलो ठूलो हात जीत पछि, तपाईं उत्साहको एक भीड महसूस यो शक्तिशाली यो भारी हुन सक्छ। धेरै जसो केसहरूमा, शुरुवातकर्ताहरूले ती भावनाहरूलाई उनीहरूको इन्द्रियहरूमाथि हावी दिन्छन्। त्यसो भए, तिनीहरूले लापरवाह त्रुटिहरू गर्न थाल्छन् जसले तिनीहरूलाई बचाउको लागि जबरजस्ती गर्दछ। भावनाले ओतप्रोत हुँदै, यी शुरुवातहरू आत्म-हारको चक्रमा घुम्न थाल्छन्।
तपाईंको भावनाहरू प्रबन्ध गरेर, तपाईं उही भाग्यको शिकार हुनबाट जोगिनुहुनेछ जुन माथिको उदाहरणबाट ती हुन्।
यस समयमा खेलको दांव के हो बुझ्दै:
अन्त्यमा, पोकर तथ्याical्कगत सम्भाव्यताहरूको वरिपरि घुम्छ। प्रत्येक हातको नक्कलहरू के हो भनेर सम्झेर, तपाईं सम्भवत धेरै मूल्यवान ज्ञानले सशस्त्र हुनुहुनेछ। किनकि तपाईं प्रत्येक खेलको दांव बुझ्नुहुनेछ, दुविधाको बादलको बीचमा तपाईं पछि कुनै कुरा पछि पर्दैन। यसको सट्टामा, तपाईं आफ्ना विपक्षीहरूका विरुद्ध प्रभावकारी अपराउन्ट आरोहण गर्दै हुनुहुन्छ जब उनीहरू विचार गर्छन् कि अर्को के हुन्छ।
पोकर सल्लाह र युक्तिहरू
हामी प्रस्थान गर्नु अघि हामी तपाईंलाई केही सल्लाहका साथ छाड्न चाहन्छौं। तिनीहरूसँग, तपाईं जानकारीको लोभ्याइएको प्यान्थेऑनमा पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ।
अन्तमा, हाम्रो दृष्टिकोणबाट, यी ती चीजहरू हुन् जसले साँच्चिकै प्रतिभाशाली मानिसबाट शुरुवात गर्न छुट्याउँछन्। धेरै जसो समय, यो त्यस्तो होइन कि तपाईं एक पेशेवरको रूपमा प्रतिभाशाली हुन सक्नुहुन्न।
यो सरल छ कि पेशेवरहरुलाई विषयको ’boutमा धेरै गहिरो समझ छ। बुझाइको खेती एक रातको प्रक्रिया होईन, यदि तपाईं सकेसम्म चाँडो शुरू गर्नुभयो भने उत्तम हुन्छ। अन्यथा, तपाईं समात्ने प्रयासमा अड्किनुहुनेछ जुन अरुको अर्को स्तरमा जानुभयो।
खेलको प्रवाहको साथ परिचित हुनुहोस्:
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, परिचितता त्यस्तो चीज हो जुन सबैले मान्न सक्छन् जब तिनीहरू चीजहरू का मोटा हुन्छन्। यो ती क्षणहरूमा हो जब भावनाहरू उनीहरूको सब भन्दा शक्तिशाली बन्छन्। परिचितिको भावना एक अन्यथा मुश्किल स्थिति निसस्तार गर्न सक्छ। त्यसो भए तपाईले शान्त पानीमा नेभिगेट गर्नु त्यस्तो चुनौतीको रूपमा पाउनु हुने छैन। जब तपाईं एक जो आँधीबेहरीको बीचमा शान्त रहनुहुन्छ, तपाईंलाई ’roundका जनतामा नियन्त्रणको एक शक्तिशाली रूप दिइन्छ। त्यो शक्ति संग, तपाईं तलको प्रविधिमा नियन्त्रण नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ।
जान्नुहोस् कसरी मनोवैज्ञानिक रूपमा तपाईंको विपक्षीहरूलाई प्रभाव पार्दछ:
मानौं तपाईं टेबुलमा केहि घण्टा बसिरहनुभएको छ। अब, तपाईले सोच्न थाल्नुभयो कि चीजहरू कसरी समाप्त हुन्छन्। एकातिर, यस्तो लाग्दछ कि तपाईं र तपाईंको विपक्षी दुबै तपाईंको डोरीको अन्तमा हुनुहुन्छ। तैपनि, यस्तो लाग्दैन कि ऊ चाँडै नै पछाडि तल जानेछ। यदि तपाईं ती जुत्ताहरूमा आफूलाई भेट्नुभयो भने तपाईं के गर्नुहुन्छ? हाम्रो लागि, सब भन्दा स्पष्ट कोर्स हाम्रो विपक्षीको टाउको मा प्रवेश हुनेछ। यस तरीकाले, हामी उनीहरूको कार्यहरू विच्छेदन गर्न सक्दछौं उनीहरूलाई थप निशस्त्र गर्न। अन्तत: यदि हामी उनीहरूलाई बाहिर निकाल्न सक्दछौं, हामी उनीहरूलाई गल्ती गर्न बाध्य पार्न सक्छौं। त्यसोभए, ज्याकपटको साथ टाढा हिंड्नु सानो थियो।
तपाईको अनुशासन सुधार गर्नुहोस्, ताकि तपाईले कहिले पनि गल्ती गर्नुहुन्न:
अन्तमा, हामी सुझाव दिन्छौं कि जीवनका सबै क्षेत्रमा अनुशासन अभ्यास गर्नुहोस्। कसरी तपाईं एक चीज गर्नुहुन्छ तपाईं अन्त्यमा केहि पनि गर्नुहुनेछ। अनुशासनको साथ बाँच्दा, अनुशासनको साथ खेल्ने दोस्रो प्रकृति हुनेछ।